पत्रकार Olesya Riabtseva: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
आफ्नो esters दिग्गज रेडियो "मास्को को इको" मा एकदम मानक छैन पछि पत्रकार Olesya Riabtseva अत्यन्तै लोकप्रिय र चिन्न पनि भएको छ। तर यो महिमा धेरै अस्पष्ट छ।
त्यो मास्टर oppositional पत्रकारिता Alekseem Venediktovym, जो, खैर, जवान सार्क कलम लागि 20 भन्दा बढी वर्ष संग उपन्यास श्रेय। Olesya Riabtseva आफु कडा यस्तो अफवाहहरु अस्वीकार र Venediktov उनको लागि सिर्फ एक नेता, सहयोगी, यो पेशामा र भूमिका मोडेल मा unshakable प्रतिष्ठा छ कि दावी। एकै समयमा त्यो उनको व्यक्तिगत जीवन, उहाँले गर्न केही छ कि घोषणा। तर हठी वरिपरि धेरै तीव्र क्यारियर विकास इच्छुक पत्रकार लागि अर्को व्याख्या पाउन रूपमा साँच्चै कठिन थियो यस्तो बहाना मा विश्वास गरेनन्।
बस एक Mistress वा सुधार को एक राम्ररी सोचेको-बाहिर उपकरण?
वातावरण लेखन मा OLES Venediktov बीच उमेर मा विशाल फरक दिइएको, आफ्नो रोमान्स बारेमा अफवाहहरु विश्वास गर्नुभयो जो, मानिसहरू छन्। "मास्को को इको" तिनीहरूले धेरै बस बताए cocky र भंगशील रिपोर्टर मुख्य सम्पादक को demonstrative संरक्षण - Olesya Riabtseva लामो समय क्रममा बिस्तारै गर्न सिर्जना मात्र राम्ररी लाग्यो-बाहिर डिजाइन र गुणस्तर Venediktov थियो, तर एकै समयमा एकदम मौलिक रेडियो स्टेशन अपग्रेड गर्नुहोस्। विश्लेषकहरूले 20 भन्दा बढी वर्ष को मुख्य सम्पादक रूपमा सेवा गर्ने मानिस, थप अरू कसैलाई भन्दा वर्तमान राजनीतिक अवस्था अन्तर्गत रेडियो अस्तित्व प्रदान गर्न सक्छ, जो, परिवर्तन को लागि आवश्यकता बुझे बताए। इंटरव्यू Venediktov अक्सर धेरै आफ्नो रेडियो पूर्ण oppositional वा अधिकारीहरु गर्न पूर्ण वफादार या त को प्रसारण हेर्न चाहनुहुन्छ कि यसो भएको छ। तर मुख्य सम्पादक विशिष्ट स्थिति कब्जा गर्न अभिप्रेरित कहिल्यै थियो, र यो घोडा हावा "मास्को को इको" रेडियो स्टेशन एक प्रकारको शामिल धेरै वर्ष को लागि यस मा छ। Olesya Riabtseva आफ्नो provocations अप पुरानो हलचल थियो र पत्रकार तिनीहरूलाई थुप्रै बस आफ्नो तथाकथित मा बसे कि धारणा खण्डन गर्न देखा सान्त्वना क्षेत्र।
Riabtseva Olesya: जीवनी
सरकारी डाटा, भविष्यमा पत्रकार अनुसार, बेलग्रेड मा 1991 मा जन्म भएको थियो। आमाबाबुले Olesi Ryabtsevoy आफ्नै सानो व्यापार थियो र छोरी5वर्षको हुँदा, तिनीहरूले मास्को उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे।
"मास्को को इको" को वेबसाइट मा आफ्नो ब्लग मा Oles केवल दुई चौका संग, खराब छ त्यो उच्च विद्यालय स्नातक भनेर लेखे। लामो समय को लागि त्यो नै "प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ" रूपमा परिभाषित गरिएको छ र स्कूल को रिलीज एक मानवीय जस्तै महसुस बस अघि सुरुमा रूपमा, भविष्यमा पेशा को विकल्प निर्धारण गर्न सकेन। केटी रूसी राज्य मानवीय विश्वविद्यालय, पत्रकारिता को संकाय गर्न दाखिल भएको थियो।
विरोध संग लाभदायक जडानहरू, "मास्को को इको" को परिचय
उनको अध्ययन समयमा, त्यो विश्वविद्यालय गरेको प्रेस केन्द्र, त्यो यस्तो विरोध र पत्रकार Yashin, Aleshkovsky, Lyaskin र Shepelin रूपमा साथ पूरा गर्ने अवसर थियो जहाँ काम गरे।
दोस्रो पाठ्यक्रम Olesya Riabtseva कुख्यात रेडियो गरियो जो प्रशिक्षण, दिशा प्राप्त गर्न सक्षम पछि। त्यो स्वीकार्छन्, यो त्यो सजिलो प्राप्त गर्न सक्षम थियो निर्देशन छ: यो शाब्दिक थियो "आफ्नो दाँत gnaw।" , यो चुपचाप र ध्यान हेर्दै जो सबै वरिपरि भइरहेको चश्मा, एक नम्र विद्यार्थीको छाप दिनुभएको भन्दै त्यतिबेला उनको सम्झना गर्नेहरूलाई धेरै।
Riabtseva Olesya जसको जीवनी को "इको" मा आगमन पछि नाटकीय परिवर्तन छ, चाँडै नै पहिचान परे परिवर्तन - एक prude ब्राजेन र scandalous क्यारियर-जो कुनै पनि आपत्ति सहनुहुन्न भयो।
मुख्यालय मा काम र एक सहायक प्रमुख सम्पादक को नियुक्ति
त्यो स्टेशन मिल्यो एक पटक, त्यो सबै उनको मुख्य याद गर्न सकिनँ गरे। त्यो कार्यालय आउनुभयो र Venediktov उहाँले रोचक काम गर्न चाहन्छ भने। मुख्य मा सम्पादक त्यहाँ मास्को मेयर को चुनाव को पर्यवेक्षण मा लगी भएको छ जो सार्वजनिक, को मुख्यालय मा काम गर्ने मौका छ भन्नुभयो।
Olesya Riabtseva यो उनको मौका थियो बुझे। त्यो एक सहायक Venediktov भयो र पूर्ण मुख्यालय माग जो सबै संगठनात्मक काम, लियो। त्यो कुशलतापूर्वक मिडिया संग संचार व्यवस्थित गर्न सक्षम र सफलतापूर्वक तालिका Venediktov को योजना मा लगे थियो। Olesya थप रिमाइन्डर बिना आफु सबै गर्छन, र Alexey ए केहि चिन्ता गर्न छैन। निस्सन्देह, उहाँले युवा विद्यार्थीहरूको प्रयासमा सराहना।
सुरुमा, त्यो अतिथि निर्माता को पोस्ट प्रस्ताव थियो, त्यसपछि यसलाई पूर्णतया व्यक्तिगत कार्यक्रम उत्पादन मा मगनी भयो र विशेष परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न। चाँडै मुख्य सहायक Venediktov - Ekaterina Kobzeva, अमेरिका मा प्रशिक्षण लागि प्रस्थान गर्न थियो, र Olesya ठाउँ Katie मा आफ्नो हात प्रयास गर्ने प्रस्ताव राखे। यसरी Riabtseva पहिलो सहायक प्रमुख सम्पादक भयो। तर, त्यो आफ्नो परियोजनाहरूको धेरै संगठित र रेडियो प्रसारण सञ्चालन।
संघर्ष, भ्रष्टाचार, quarrels र provocations ...
एकदम अक्सर व्यावसायिकता को कमी को आरोप यो केटी, वा बरु, उनको फिटनेस स्तर कि क्यारियर लागि पर्याप्त छैन भनेर, त्यो गर्न चाहन्थे लाग्यो। त्यो रूसी साहित्यिक भाषा को गरिब ज्ञान आरोप थियो, र बयान अनपढ अवैतनिक छलफल Ryabtseva। कहिलेकाहीं, त्यो "एक सानो" obscenely, एक उन्माद मा आलोचकहरु नेतृत्व को हावा मा राख्न उठयो सक्छ। "- Olesya Riabtseva" "को" मास्को को इको को संयोजन कि छाप असम्भव र अनुचित: पदहरू सेवा धेरै pretentious र अक्सर प्रत्यक्ष अपमान को कगार मा थियो।
Olesya "इको Moskvy" आफ्नो समयमा यसको प्रमुख तथ्याङ्कले धेरै विदाई बताए। व्लादिमीर Solovyov र विक्टर Shenderovich किनभने खराब आचरणमा र यसको Ryabtseva बयान को हावा मा भाग लिन इन्कार गरे। केही समय Olesya Mitya Aleshkovsky कार्यक्रम "सहायता" नेतृत्व संगै, दान समर्पित। सँगै एक सानो काम, सह-पाहुना प्रत्येक अन्य केही दावा थियो। यो द्वन्द्व Venediktov आए, र विवाद को विजेता को पाठ्यक्रम, थियो, एक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थियो जो Ryabtsev।
विरोध को गतिविधिहरु संग निराश, Olesya आफु Navalny तिर अत्यन्तै तेज र अपमानजनक टिप्पणी दिनुभयो। विरोध बाँकी पनि अक्सर जवान पत्रकार साहसी तिनीहरूलाई भनिन्छ जो सबै बस एक amorphous ठूलो को unflattering समीक्षा पस्त। Venediktov निरन्तर केटी गरेको ठिक जिब्रो सिकार र "शांत" उनको अनुरोध एक बिट देखि उजुरी सुन्न।
जासूसी को शुल्क
घमन्डी पत्रकार उपस्थित थियो जो अमेरिकी राजदूत संग बैठक पछि, उहाँले अर्को घोटाले भङ्ग। Riabtseva Olesya, हुनुको सहायक Venediktov, मात्र होइन आफ्नो समय तालिका र सभाहरूमा को अनुसूची योजना, तर पनि तिनीहरूलाई थुप्रै लागि महाराज सँगसँगै। त्यो, सरकार सभाहरूमा सबै प्रकारका पहुँच थियो TASS मा नास्ता (सेवक र विभिन्न प्रकाशनहरू को मुख्य सम्पादक बीच) उपस्थित र कहिलेकाहीं पनि सरकारी सभाहरू धाउन सक्छ।
एक पटक, अमेरिकी राजदूत संग एक बैठक पछि, Riabtseva साइट "मास्को को इको" जो धेरै अनपढ भनिन्छ छन् पाठ, पोस्ट गरेको छ। पोस्ट को सार को Oles, एक बैठक वर्णन भन्ने तथ्यलाई थियो यूहन्ना Tefft, त्यो मास्को मा सामान्य मुड, विरोध स्थिति बारे उहाँलाई भन्नुभयो रूपमा लेखे र उनको मजाक भन्नुभयो कसरी देश को अवस्था, आफ्नो मात्र बढन को नीति सुधार गर्ने प्रयास मा । एउटा पोस्ट यस्तो किनभने शब्द "भन्नुभयो" को गलतफहमीले धेरै कारण छ, नकारात्मक समीक्षा एक उत्तेजना कारण के उद्देश्य Riabtseva साधारण यस्तो स्तर को एक सभामा उपस्थित। टिप्पणीकारहरू बौछार Olesya एक पत्रकार रूपमा, त्यो पछि "सोध्न" गर्नुपर्छ, कि भन्दा "बताउन" तिनीहरूलाई quip। शुल्क Ryabtsev खुल्लमखुल्ला र डर बिना अमेरिकी राजदूत सबै राज्य रहस्य दिन्छ जो एउटा जासूस, भनिन्छ कि बिन्दु गर्न पुग्यो।
को scandalous स्थानान्तरण मा फिलिम
"मास्को को इको", भ्रष्टाचार र सम्बन्ध व्याख्या को सेट मा एक जबरदस्त क्यारियर पछि, पत्रकार स्टेशन बाँकी एक वक्तव्य गरे। NTV मा Olesya Riabtseva त्यो जानकारी पुष्टि। त्यो शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित भएको थियो जुन यस च्यानल, को प्रसारण मा देखा जब त्यो एक छप गरे "चियोचर्चा को रानी।" उनले भित्रबाट सिक्न मौका थियो, विरोध बारेमा उनको राय साझेदारी। धेरै राजनीतिज्ञ उदाहरणका लागि, Kasyanov डर प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा उनको आउन थियो एक कायता भनिन्थ्यो, धेरै कडा उनको भाषा बाट पायो। Navalny आफ्नो retinue बिना केहि लागि कुनै राम्रो छ, जो "downed पायलट" र "राजनीतिक impotent", स्थिति प्राप्त। Khodorkovsky त्यो "भयानक मानिस" र भनिएको "ठूलो manipulator।" त्यो बाटो द्वारा Sobchak बारम्बार यस्तै बैठक संगठित गर्ने प्रयास गरेको छ यद्यपि, व्यक्ति मा, पूरा र त्यो दिनुभयो एक साक्षात्कार दिन जो, एक जवान पत्रकार र Ksenia Sobchak, सम्झना।
Olesya Riabtseva NTV प्रतिक्रिया र आफ्नो पूर्व सहकर्मी, त्यो "मास्को को इको" तिनीहरूलाई unprintable epithets awarding, धेरै निष्पक्ष, काम थियो कोसँग। Venediktov यो समय आफ्नो जवान protege यस्तो फोहर बयान लागि रेडियो स्टेशन को कर्मचारीलाई माफी माग्न बाध्य, तर उहाँले कडा यो परियोजनामा Olesya शूटिंग Glavred योगदान बताए थियो।
रेडियो संग उपचार
प्रसारण को रिलीज पछि, धेरै, आश्चर्य गर्न थाले मास्को को इको "Olesya Riabtseva" "कहाँ संग गरे"? को पत्रकार यसलाई आफ्नो निवास स्थान परिवर्तन गर्न र मास्को छोड्न योजना छ। जहाँ यसलाई आफ्नो नयाँ, पहिले नै पूर्णतया स्वतन्त्र मिडिया परियोजना सुरु गर्न योजना Ryabtseva लागि नयाँ रोक्न बिन्दु, सेन्ट पीटर्सबर्ग हुन्छन्।
मेटिल्डा Mozgovaya: जीवनी र फोटो
मास्को मा एक डबल आक्रमण - यो मेट्रो मा एक विस्फोट। "Lubyanka" र "पार्क Kultury", मार्च 29, 2010 G:। घटनाहरू क्रनिकल, रेल फोटो
RFE / आर एल: स्टीफन जरा वा इच्छा को इस्तीफा सफाइ?
Golovanov Andrey Aleksandrovich: आफ्नो जीवन र राय खेल टिप्पणीकारले को पेशा बारेमा
सिस्टम आवश्यकताहरु Dota 2: विवरण र परियोजना मा तालिका
Krylov गरेको छोटो कथा "द कुखुरा र मोती": षड्यन्त्र र विश्लेषण
प्राकृतिक वा कृत्रिम प्रक्रिया: संकरण के हो?
साइकल भागहरु र आफ्नो नाम
कर्मचारी "मोबाइल तत्व" बाट प्रतिक्रिया कम्पनी मा काम गर्न
"Exoderil"। प्रयोगको लागि निर्देशन
को Jedi को नायक लागि तरवार कसरी बनाउने
फिनल्याण्ड मा रिसोर्ट्स: सान्टा क्लाउस एउटा यात्रा जाँदै!